Duqii hore ee Muqdisho oo noqday safiirka cusub ee Somalia u fadhiya Kenya - Caasimada Online
Home Warar Duqii hore ee Muqdisho oo noqday safiirka cusub ee Somalia u fadhiya...
Duqii hore ee Muqdisho oo noqday safiirka cusub ee Somalia u fadhiya Kenya
Nairobi (Caasimada Online) – Duqii hore ee magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa noqday safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. Waxaa maanta warqadaha ka guddoomay madaxweynaha Uhuru Kenyatta.
Nur oo duqa Muqdisho iyo guddoomiyaheeda ahaa inta u dhaxeysay 2010 ilaa 2014, waxaa uu 2016-kii ka mid ahaa murashaxiinta doorashada madaxtinnimada, waxaa uu hadda baladayaa Jamaal Xasan oo ka mid ah golaha wasiirrada, waa wasiirka qorsheynta.
Magacaabistiisa ka hor, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaa uu ahaa la-taliyaha dhanka siyaasadda ee madaxweyne Farmaajo.
Maanta ayaa lagu qaabilay madaxtooyada Kenya, waxaana sidoo kale aqoonsiga laga guddomay 16 kale oo safiir.